Glass Vase Factory - China Glass vase Vagadziri, Vatengesi
Bhodhoro remafuta emaorivhi
Yakakwira Boron Silicon Kuchengeta Tangi
Tafura diki vhasi
European vase dhizaini
Round perfume diffuser
Mudiki mukanwa mira zviyo ruva
Manhanga kudiridza anogona
200 ml aromatherapy mabhodhoro
Crystal mangoda girazi rinoonekera chigadziko chemwenje
1000ml inotungamira-isina soda bhodhoro
500 ~ 1000ml tawny nhema nhema girini yemafuta emuorivhi bhodhoro
【Yakanaka Dhizaini uye Inoshanda】 Wedzera imwe vara kune yako yehunyanzvi mhizha nzvimbo ine isingadzivisike Cactus caddy! Yakakwana yekuchengetera mapenzura, makrayoni, manotsi anonamira, chigero, makomisi erase uye nezvimwe zvakawanda.
【Yakasimba Acrylic Kuvaka】 Yakagadzirwa neasina chepfu Ceramic uye yakasvibira pendi, inokodzera munhu mukuru kana vana 3yrs +.
【Hapana Chinodiwa Unganai】 Unogona kuiisa muhofisi, mukirasi, tafura isina maturo, nzvimbo yemifananidzo, imba yekurara..Izvi zvakakugonesa kudzikisa midziyo uye kuronga zviri nani.
【Yakakwana Sarudzo Chipo】 Inouya mune yakasimba chipo chipo kurongedza, chakanakisa chipo chemudzidzisi, vadzidzi, vakomana vadiki nevasikana.
【Chengeta Tafura Yako Yakatsvinda】 Penzura poto ine pendi inochengetera akakosha mapeni, mapenzura & yakamira ichichengeta desktop yako isina-kuwanda uye yakachena.
RETRO DESIGN - Iyi mvura inogona ine retro uye vintage dhizaini iyo inogona kushongedza & kuzadza gadheni rako.
PUMPKIN STYLE - sima mister ane manhanga dhizaini mune rakasiyana ruvara.
ANOGONESESA NOZZLE - Kunaka atomization, inogadziriswa kamwene, inogona kupfapfaidza mhute kana tambo yakatwasuka.
RAKAreba NOZZLE DESIGN - Inouya nekapurasitiki refu, iyo inobvumidza iwe kudiridza zvirimwa zvidiki nyore.
YAKANYANYA KUSHANDA - Yakanakisa kune yako yese yemumba zvinodiwa kusanganisira kuchenesa, kudyara, kuchenesa zvigadzirwa, zvakakosha maoiri, kurasa zvirimwa nemaruva, misting mashizha uye kuchenesa windows. uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa.
Vertical mitsetse vhasi
Yakagadzirwa segirazi risingadziviriri, unogona kunge wakaomeswa maruva kana hydroponics yekushongedza nzvimbo yako.
Iwo madiki madiki maumbirwo uye zvirimwa zvakasvibirira zvinowedzera simba rakawanda kumba kwako kana kuhofisi kumba kwako kana kuhofisi.
Inokodzera tafura, bhenji, kabhineti uye kushongedza kwepamusoro, kunyanya kune hwezuva nezuva hupenyu nemuchato.
Yakakura Kushongedza zano repamba, gadheni, Muchato kana mazororo. Inobatsira kushongedza uye kuchenesa imba yako kana hofisi, yakanaka yekushongedza iwe
Yakanaka vase yekushongedza ine rakakodzera ruva, munzvimbo inoyevedza, inofadza kune ziso.
★ Zvinhu: Girazi
Ruvara: Girinhi, Grey, Bhuruu, Pepuru, Transparen
★ Bumbu rakazara revhisi ruva rakarongedzwa rinouya zvishoma kubva parunako rweiyo ruva zvinhu uye pamwe kubva kudziviriro yevhasi. Ichi chigadzirwa chemaruva, chinopa imba yakasununguka kune yakawanda maruva.
★ Muromo wevhasi wakakwenenzverwa, wakakomberedza uye wakatsetseka pasina kukuvadza ruoko.
★ Pasi pebhodhoro rakakora uye rakaiswa mushe uye rakasimba
【Dollhouse Kushongedza】 Iyo yakanaka sei nzira yekuwana yako Favorite Dollhouse! Tora izvi seye-yekuwedzera seti kune yako imba yedhori, kana iri yega! Inosanganisira zvese zvaungangoda kutamba uye kunyepedzera.
Gift Chipo Chakakwana】 Super Yakasimba Kutamba Mafananidzo ari Akakwana eVadiki Maoko! Yakakura yeMufananidzo Mutambo uye Yakakwana Kuwedzeredzwa kweVo Dollhouse Unganidzo.Christmas chipo, brithday chipo.
【Yekuvandudza Toyi】 Aya masetetsetsi anoyevedza anosimudzira kugona kwakanaka kwekuziva kuburikidza nekunyepedzera kutamba. Kuratidzira rondedzero kunoratidza kurondedzera uye kufunga kwekufunga, nepo hunyanzvi hwemotokari uye hunyanzvi huchivandudza sevadiki vanoshandisa nharaunda dzinonakidza.
【Zvinhu Zvakachengeteka】 Asina chepfu anopedza uye zvakachengeteka zvemwana zvinhu.
【Cherechedzo】 Chinhu ichi hachisi saizi yehupenyu, yekushongedza chete, pasina inoshanda basa.
Nzeve infusion bhegi kana bhodhoro
Chinyorwa: girazi rinodzivirira mhepo, simbi isina simbi yakasanganiswa netopu tambo, American nyika masitayera.
Iri kenduru rinopa kenduru, zvichiratidza kuti kana kenduru painotsva, usafambisa ruoko.
Iwe unogona zvakare kushongedza nzvimbo yako sevhasi, isa chirimwa, kana kuteedzera chirimwa.
Kana iwe uchifunga kuti iyo chaiyo kenduru ine njodzi, iwe unogona kuisa yemagetsi kenduru.
Nezve mafashoni shuwa, vanhu vemazuvano vari kuwedzera kushandisa chigadziko chemwenje, makenduru kushongedza imba, kukwidziridza mamiriro.
Yakagadzirwa neLead yemahara girazi
Yakashongedzwa Yemazuva Ano Dhizaini yakagadzirwa nehunyanzvi
Yakagadzirirwa kushandiswa nyore uye kuchengetedza, inokodzera nguva dzese
Denderedzwa perfume diffuser
Iyo vhasi regirazi rakagadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu, ese mativi uye ezasi akaomesesa dhizaini anomira akatsiga. Kumucheto kwemuromo wemabhodhoro kwakatsetseka, uye maruva akarongeka haazokwenya ruoko rwako.
Vertical prismatic stripe dhizaini inoita kuti iwedzere kukoshesa kushongedza, kujekesa pakatarisa kuti iwe unogona kuona madzinde.
Iko kusanganiswa kwekushandisa uye aesthetics, yakanaka yekushongedza girazi vhasi rekuronga maruva kana kurimwa kwembeu; Dhizaini dhizaini asi nyore yakashongedzwa neakasiyana maitiro.
Iyo girazi ruva vhasi yakanaka kune yako imba, hofisi, cafe, yekurara uye zvichingodaro. Iko kusanganiswa kwemaruva akanaka nemavhasi zvinogona kuve nzvimbo yakanaka munzvimbo yako.
Xuzhou Honghui girazi zvigadzirwa Co, Ltd. inogamuchira vatengi kubva pasi rese, isu tiri kutarisira kuzove wako akavimbika mudiwa!
Junsheng Plaza 3-1202, Gulou Dunhu, Xuzhou, Jiangsu, China
Reusable girazi bhodhoro
Unoziva here? Kune akawanda marudzi e glas ...
Unoziva here kugadzira mabhodhoro egirazi？